Sidee Haweenay samee karaa More on Arbacada ah? Iska dhigaa inuu noqon Man a - Rule News
Sidee Haweenay samee karaa More on Arbacada ah? Iska dhigaa inuu noqon Man a
Ragga kasban 20% dheeraad ah oo ku celcelis ahaan ka badan haweenka iibinta waxyaabaha cusub isku on Arbacada ah, daadiyaan iftiin on eexasho miyir oo saamayn ku dhaqanka iibsato
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Sidee qof dumar ah oo ka dhigi kartaa badan oo ku saabsan Arbacada ah? Iska dhigaa inuu yahay nin” waxaa qoray Sample editor Science Ian, waayo, The Guardian-ka on Friday 19 February 2016 19.04 UTC
Dumarka alaabta online iibiso muuqata doonan kartaa qiimaha sare haddii ay raali ka yihiin inay ka mid tweak fudud in ay garoonka ku jira: iska jira ay yihiin rag.
Maxsuulka ka soo baadhitaan oo ay ogaadeen in dadku celcelis kasbadeen 20% in ka badan haweenka marka ay iibin waxyaabaha cusub isku on Arbacada ah.
farqi ayaa u muuqda in uu ka janjeera ee dhammaan iibsada iman – labadaba ragga iyo dumarka – in ay bixiyaan wax ka yar waxyaabaha kor loogu talagalay xaraashka ee suuqa online markii iibiyaha waa qof dumar ah oo.
"Waxaan filayaa in ay ka heli farqiga a, laakiin waxaa naloo yaabay baaxadda, gaar ahaan sababtoo ah saamaynta ugu weyn ahaa ee wax soo saarka cusub halkaas oo dumarka iyo ragga waa la iibiyo si sax ah wax la mid ah,"Ayuu yiri Taamaar Kricheli-Katz, sociologist ee Tel Aviv University.
Related: Sida aynu u hagaajin karaa cunsuriyada miyir? | Nathalia Gjersoe
Natiijada waxaa ku fikiray si wax looga fahmo waraku miyir saameeya dhaqanka dadka gadashada. Mid ka mid ah sharaxaad ay suuragal tahay, sara kiciyey, by qorayaasha, waa in dadka kama 'u yeelaan ka qiima badan tihiin in waxyaabaha ay leeyihiin rag badan haweenka, taasoo keentay iibsada kara inay dalab ka badan.
Haddii daraasadda waxaa lagu taageeray cilmi baaris dheeraad ah, waxa uu noqon lahaa mid ka mid ah kii ugu horeeyay ee la xogta dhabta ah wax soo saarka muujiyaan sida sinnaan iyo takoorka ku riday dumar at khasaaro ah oo joogto ah oo suuqa online.
Kricheli-Katz oo ah dhaqaaleyahan Tali Steinitz falanqeeyay iibka ee US 420 waxyaabaha ugu caansan ka kala duwan ee ay ka buuxaan qaybaha Arbacada inta u dhaxaysa 2009 iyo 2012. Oo waxay arkeen in dumarka kor u dhigay ku dhawaad ​​rubuc ka mid ah iibiya ee dataset ah, iyo in inkasta oo waayo-aragnimo yar iibinta, waxayna ku raaxaysteen sharafta wanaagsan sida iibiya.
kala duwani waxay in qiimaha la bixiyaa alaabta ahaa cad in alaabta loo isticmaalo iyo sidoo kale cusub, laakiin farqiga u ahaa fog ka yar. celcelis, iibsada bixisay dumarka 97% qiimaha ay rag bixisay waxyaabaha labaad isla. Farqiga waxaa laga yaabaa in yar, maxaa yeelay, eexda ka dhanka ah dhadig, waa ku dhawaad ​​mowjadda by iibsada isagoo isku halleeya ka badan sharaxaada haweenka waxyaabaha labaad, cilmi qori weriyey Horumarada Science.
In kastoo iibiya Arbacada ah ma sheegi jinsigooda on goobta, cilmi ku orday tijaabo gaar ah oo muujisay in usernames iibinaya ', iyo waxyaabaha ay u iibin, wuxuu ahaa hage ah oo sax ah. "Haddii aan iska iibiso iPhone ah, laakiin sidoo kale kabaha iyo kiishad, waxa ay noqon doontaa mid fudud in wax ii aqoonsado sida dumar ah,"Ayuu yiri Kricheli-Katz. "Oo alaabta more waxaan ka iibin, dadka si sax ah ii qeybin karaa. "
Si aad u tijaabiso ay shaki in iibsada dumarka bixisay in ka yar ragga sababtoo ah jinsigooda, Labada ciyaaryahan ku orday tijaabo online. Waxay dadka ka codsaday in ay sheegi inta ay bixin lahaa a $100 Amazon foojarka. Marka foojarka waxaa ay bixiyaan "Brad", dalab ay ahaayeen sare ka badan markii la bixiyo "Alison".
natiijooyinka ayaa muujinaya in, celcelis, Haweenka nabdoonaa ka xun ee suuqa online. Laakiin iibsiga ah oo wuxuu galay xogta shaaca ka qaaday qaar ka mid ah upsides waratada dhaddig. In qaybaha qaarkood, Haweenka sida caadiga ah ka iibiyey alaab la mid ah in ka badan rag sameeyey. model A gaar ah oo Barbie iibin 16% dheeraad ah si ay dumarka iibiya, halka cuntada xayawaanka, inexplicably, iibin 20% dheeraad ah. Dhinaca kale, nin sameeyey shir sanadeedkii a 270% dheeraad ah marka lagu iibiyo Nintendo Wii a, 30% dheeraad ah oo ku printer ah kaamerada, iyo 20% dheeraad ah oo ku kubadaha golf. mindi A-laabanto iibin 61% yar marka iibin by dumar ah oo nin ka badan. "Ma doonayo in aad noqon naag iibinta ah in,"Ayuu yiri Steinitz.
All of taas oo ka dhigeysa in su'aasha ah waxa qof dumar ah oo ay ku sameeyaan. Mid ka mid ah istiraatiijiyadda cilmi maqlay waa loogu tala galay dumarka in ay qaataan username lab on Arbacada ah iyo iska iibiso mid wax waqti ah si ay u caawiyaan qarin jinsigooda. Laakiin mana Kricheli-Katz mana Steinitz yihiin taageerayaashiisa hab in. "Ma doonayno in ay dunida ku nool ay dadku qarin jinsigooda. Waxaa laga yaabaa in muuqdaan sida istaraatijiyad wanaagsan, laakiin waxaan waa in la yareeyo farqiga this siyaabo kale,"Ayuu yiri Kricheli-Katz.
"Istiraatiijiyad A wanaagsan iibsada si ay u eegaan loogu talagalay dumarka iibiya iyo si ay u iibsadaan iyaga ka,"Ayuu yiri Steinitz. "Waxay ka heli kartaa qiimaha wanaagsan, laakiin waqti isku mid ah, yeedhiddii badan oo ku saabsan waxyaabaha haweenka ee kaa caawin doontaa in ay soo yareyn farqiga. "Better weli, bixin haweenka qiimaha la mid ah sida iibiya lab.
"Waxa aan dhab ahaan rajaynaynaa waa in ay qaadashada dad badan ka war kuwan eexasho miyir, waxaa laga yaabaa in muddo farqiga u yareyn doono,"Ayuu yiri Kricheli-Katz. Si taasi ka sii daran, Haweenka sida caadiga ah ka badan ragga bixiyo waxyaabaha ay soo iibsaday on Arbacada ah.
In joornaalka qorayaal ka kicin su'aalo ku saabsan suuqa kale oo jinsi ah oo iibiya marnaba shaki uu ku jiraa: "Sida siyaasad, Arbacada ah uusan si cad sheegto jinsiga ah ee isticmaala ay. Si kastaba ha ahaatee, rag iyo dumar yihiin si fudud jinsiga kala saaraa by kale ee isticmaala. Waxaan ka shakisan tahay in divergences weyn ay joogaan suuqyada kale ee wax soo saarka meesha jinsiga had iyo jeer waa yaqaan,"Oo ay qoraan.
21907	4 Qodobka, Arbacada ah, Sinnaanta, Ian Sample, qaybta Main, News, Psychology, Science, The Guardian-ka, news UK
← 14 Times Google Dhab Saved Life qof [hablahoodu] Time Perfect The Year of inay Samee 10 Iibsasho Big [MENTALFLOSS] →